Wati waita mbambo yechipikiri neiyo UV mbambo gel?
Vazhinji vanhu vanoziva kuti chipikiri chechipikiri chinoiswa kana uchiita hunyanzvi, asi chii chaizvo ichi chikamu chechipikiri? Nail polish gel inozivikanwawo seiyo UV nzara polish gel, chinova chigadzirwa chakakwidziridzwa chechipikiri. Iko kuumbwa kwembambo yekumisikidzwa kwembambo kunosanganisira base resin, photoinitiator, uye akasiyana ad ...
Simbisa gel nzara gel uye uv Top jasi jira zvinoshandiswa mune nhanho ipi
Mhando nemaitiro epikiri yechipikiri gel inowanzo shandiswa muhunyanzvi hwembambo ndeiyi: base jasi jeri ng Simbisa gel ～ 2 nhanho uye nhanho nhanho gel yekumhanyisa ～ Yepamusoro gel jasi Simbisa chipikiri gel uye yepamusoro jasi gel maviri akakosha ezvipikiri gel mune zvipikiri art. Nekuda kwemabasa avo akasiyana, nhanho dzinoshandiswa zvakare dzakasiyana ...
Kuziva kweUV Nail Gel ChiPolish kugadzira
Chipikiri Gel ChiPolish Nail Gel polish, inozivikanwawo sembambo UV kupora, yakashandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvipikiri mumakore apfuura. Nekuda kwehunhu hwekupenda kwembambo pachahwo uchienzaniswa nechaicho chipikiri chemafuta polishi, Nyowani ruvara runako gel Chipikiri polish inoshamwaridzana nharaunda, haina-chepfu, ine hutano uye ...
Iyo Nail Art ine kushandisa UV gel polish, iwo mavara akanaka uye anoshamisa
Vasikana vanoda runako nemasikirwo. Izvo zvakakodzera kuti uzvipfeke zuva nezuva. Kunze kwekutarisa pakupfeka, unogona zvakare kuyedza masitaera akasiyana eNail Art nekushandisa Uv Gel Polish kuti uzviitire zvakasiyana. Seyakanakisa mugadziri weUV gel zvigadzirwa, isu pano tinoratidza zvimwe zvinoyevedza akati wandei sy ...
2021 Chipikiri Art Indasitiri Musika Kuongorora Chirevo
Iyo mbambo yeindasitiri indasitiri ine hombe purofiti margins. Zvinoenderana nemishumo kubva kune vanoongorora nezvehunyanzvi, musika wehunyanzvi hwenzara munyika yangu uri kukura nekukurumidza pamwero wekukura unosvika mazana maviri muzana gore rega rega. nyika yangu ine rakakura boka revatengi. Iyo indasitiri yehunyanzvi indasitiri inozivikanwa seyepamusoro-purofiti ...
Maitiro ekuparadzanisa maviri mavara echipikiri art nejeli chipikiri zvigadzirwa
Vanhu vazhinji vanofunga kuti nzara dzakasimba-dzemuvara hadzina kuroorwa, saka unogona zvakare kuyedza maviri-mavara kana akawanda-mavara kukonona, asi muchokwadi, iwo mavara maviri echipikiri art anogona kupatsanurwa zvakasikwa? Ini ndapfupisa idzi nzira uye dhizaini kune wese munhu. Chipikiri art yave yemafashoni uye yakasarudzika. ...
Vazhinji vasikana vanoda kugadzira zvipikiri kuita kuti minwe yavo iratidzike chena, asi havazive kuti zvinoda marii kuita chipikiri, saka vanowanzo nzwa kunyengedzwa ne manicurist mushure mekuita chipikiri. Heano wepakati mutengo weakakodzera zvipikiri art kune yako mareferenzi. Chaizvoizvo, iyo mitengo yezvigadzirwa ...
Ko nzara dzichava dzakatetepa uye kuonda kana ini ndichiita zvipikiri art neinzara gel polish?
Vhura "New Year Mode"! Runako uye indasitiri yezvipikiri iri kuwedzera padhuze neMutambo weChirimo
Sezvo Mutambo weChirimo uri kusvika, vagari vazhinji vatanga kutenga zvinhu zveGore Idzva, uye Mwaka Mutsva wakanaka ichiri chinhu chinodziisa moyo kune wese munhu zvisati zvaitika. Vanoda runako vari kubatikana kupfeka pamberi peGore Idzva. Kunze kwekutenga mbatya nyowani nekuchinja magadzirirwo ebvudzi, zvakanyanya ...
Anopenya Gel Polish